Robin van Persie oo sheegay in gool udhalinta United ay ka adagtahay ku biiristeeda | Goolhaye.com
Robin van Persie oo sheegay in gool udhalinta United ay ka adagtahay ku biiristeeda
January 3rd, 2013 by Home » Horyalaada » England » Robin van Persie oo sheegay in gool udhalinta United ay ka adagtahay ku biiristeeda
Robin van Persie oo sheegay in gool udhalinta United ay ka adagtahay ku biiristeeda	Manchester United weeryahankeeda Robin van Persie ayaa amaanay ciyaaryahanada ay isku kooxda yihiin kadib guushii ay ka gaareen kooxda Wigan Athletic Asbuucan.
Gool dhaliyaha Dutch ka ayaa dhaliayay labo gool xili ay Wigan ku garaaceen 4-0.
“tani waxey ii tahay faraxad qaas ah inaan la ciyaaro kooxdan qaaska ah ” ayuu u sheegay MUTV. “qof kastoo inag mid ah waxuu raba in uu mid ka kale caawiyo. Qof kasta wuu ku farsxanyahay in qof ka kale uu ka caawiyo in uu gool dhaliyo.
Daafacyad ayaa u shaqeeyaan si adag qadka dhxe ee u garsiiyayn kubadah , halka qadaka dhxe eey hool badan ku bixiyan in weerarka eey garsiiiyan kubadaha waana wax fudud in aad gool udhaliso United laakin ma fududa in aad ku soo biirto
One Response to Robin van Persie oo sheegay in gool udhalinta United ay ka adagtahay ku biiristeeda	cumar yare Reply
January 6, 2013 at 4:06 pm	ma fahmin qoraalka saad u qorteen
- Powered by WordPress - Designed by goolhaye free website tracking